Jabuuti Archives - Sawirrotv
Tag Archive for: 'Jabuuti'
Madaxweyne Farmaajo oo Isla Maanta Gaaray Dalka Jabuuti (SAWIRRO)
Madaxweyne Maxamed C/laahi (Farmaajo) iyo wefdi uu hogaaminayo oo safar shaqo ku maraya qaar ka mid ah wadamada ay ciidamadu ka joogaan dalka Soomaaliaya ayaa maanta Magaalada Jabuuti waxa uu kulan kula yeeshay Madaxweynaha dalkaasi Jabuuti, mudane Ismaaciil Cumar Geelle. Labada Madaxweyne ayaa ka wada hadlay sida labada dal Jabuuti iyo Soomaaliya ay isaga kaashan …
Madaxweyne Geele iyo Madaxweyne Farmaajo oo Maanta Dhagaxdhigay Dhismaha Safaaradda Cusub ee Dalka Jabuuti (VIDEO)
February 22, 2017 – Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo uu wehlinayo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) ayaa maanta dhagax dhigay xaruntii hore ee Safaaradda Jabuuti ee ,magaalada Muqdisho. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa tilmaamay in maanta ay u tahay maalin taariikhi ah, maadaama uu dhagax dhig ku …
Diyaaradda Jabuuti Airlines oo Maanta Soo Cagadhigatay Garoonka Muqdisho (VIDEO)
November 15, 2016 – Diyaaradda Jabuuti Airlines ee laga leeyahay dalka Jabuuti, ayaa maanta markii u horeysay ee mudo 25 sano ah soo caga dhigatay garoonka diyaaradaha Aden Adde Internationel ee Magaalada Muqdisho. Jabuuti Airlines ayaa duullimaadyo toos ah waxa ay ka biloowday Magaalooyinka Jabuuti iyo Muqdisho, waxaana la sheegay in ay ka mid noqon …
DAAWO: Weerarkii Maanta Lagu Qaaday Ciidamada Dalka Jabuuti (FULL)(VIDEO)
October 25, 2016 – Weerarkan oo uu fuliyay nin la socday gaari nooca xamuul ah oo qaraxyo lagu soo buuxiyay, ayaa ka hor intii aanu is qarxin waxaa rasaas isaga caabiyay Ciidamada Jabuuti ee qaybta ka ah ciidamafda Amisom, taasoo keentay in markii danbe uu gaarigaasi ilinka hore uu ku qarxo. Qoraal ay Amisom ku …
DAAWO: Weerarakii Maanta Shabaabka ay ku Qaadeen Xarunta Ciidamada Jabuuti ee Magaalada Baledweyne (VIDEO)
October 25, 2016 – Waxa ay Warar dheeraad ahi kasoo baxayaan qarax ismiidaamin ah oo maanta ay dagaalyahanada Al shabaab ay ku qaadeen saldhig ay Ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa dalka Jabuuti ku leeyihiin Xaafada Howl-Wadaag ee galbeedka magaalada Baladweyne. Weerarakani ayaa waxaa loo adeegsaday gaari nuuca xamuulka ah, oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa, …
Madaxweynaha oo Maanta Warqadaha Aqoonsiga ka Gudoomay Safiirka Cusub ee Dalka Jabuuti (VIDEO)
September 08, 2016 – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa maanta Xarunta Madaxtooyada warqadaha aqoonsiga kaga guddoomay danjiraha cusub ee Jamhuuriyadda Djibouti u fadhin doona magaalada Muqdisho, Mudane Aadan Xasan Aadan. Madaxweynaha ayaa safiirka cusub u xaqiijiyey in Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ay si buuxda ula shaqeyn doonto, una fududeyn doonto gudashada waajibaadkiisa. …
Madaxweynaha Puntland oo la kulmay Madaxweynaha Dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle (SAWIRRO)
September 01, 2016 – Madaxweynaha maamulgoboleedka Puntland mudane, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa kulan gaar ah xarunta madaxtooyada ee dalka Jabuuti kula qaatay Madaxweynaha dalkaasi Ismaaciil Cumar Geelle. Kulankan labada Madaxweyne dhexmaray ayaa waxaa looga wada hadlay xoojinta xiriirka qotada dheer ee u dheexeeya dawladda Jabuuti iyo maamulka Puntland iyo sidii la isaga kaashan lahaa dhinacyada …
Safiir Dubbad oo Maanta Laga Sagootiyay Magaalada Muqdisho (SAWIRRO)
August 13, 2016 – Madaxweynaha dowladda Federaalka ee Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta Xarunta Madaxtooyada ee (Villa Somalia) qado sharaf sagootin ah ugu sameeyay Danjiraha dowladda Djibouti u fadhiyay dalka Soomaaliya Mudane, Dayib Dubbad Rooble oo waqtigiisu uu dhammaaday. Madaxweynaha ayaa ku ammaanay Danjire Rooble waxqabadkiisa iyo dadaalka uu u galey taageerada Soomaaliya. …
Jeneraal Subagle oo Lagu Wareejiyay Hogaanka Ciidamada Amisom (SAWIRRO)
July 19, 2016 – Ururka AMISOM ayaa janaraal Cismaan Nuur Subagle u magacaabay Taliyaha cusub ee howgalka midowga Afrika, wuxuuna xilka si rasmi ah ugula wareegay taliyihii isaga ka horeeyay ee janaraal Jonathan Rono kadib markii ii waqtigiisii dhamaaday. Janaraal Subagle taliyaha cusub ee AMISOM ayaa kulan la yeeshay wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya ahna …
Madaxweyne Geele oo Markii Afaraad ku Guulaystay Doorashooyinka Dalka Jabuuti
April 09, 2016 – Dowladda dalka Jabuuti ayaa ku dhawaaqday in doorashadii shalay ka dhacday dalkaasi uu ku guuleystay Madaxweynaha talada haye ee Ismaaciil Cumar Geelle, kadib markii uu helay codad ku filan. Qoraal kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Jabuuti ayaa lagu sheegay in Mr Geelle uu helay codad gaaraya 68.68, taasi oo suurta gelinaysa …